ရဲနည်| September 20, 2012 | Hits:4,226
| | အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိမ်ဖြူတော်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
thant htet September 20, 2012 - 10:42 pm WE support unti SU n our gov,if u r aginst ,u no have brain,think carefully previous years.find money with possible way,dont cheet from donor. DO u think u say yr self,i m refugee.donor will give u money,its right but if u r like this u r same with useless.
Reply Min Myat Thu September 22, 2012 - 10:51 am မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှု မှာ တပ်မတော်သား (ငြိမ်း)များကို လျှော့ချပြီး အရပ်သား ပြည်သူတွေ ကို နေရာပေးလာ ဖို့ လိုပါတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဖြစ်သည့် ဦးဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူး ၊ ညွန်ကြားရေးမှူး ၊ ကျောင်းအုပ် စသည့် ရာထူးများနေရာတွင်လည်း တပ်မတော်သား (ငြိမ်း)များကို လျှောချပြီး အရပ်သား ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကို နေရာပေးဖို့ လိုပါတယ်။ လက်တွဲခေါ်ဖို့ လည်းလိုပါတယ်။ သို့ မှသာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို လျှင်မြန်စွာနဲ့ လျှောက်လမ်းနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။